Fepetra IQ Option ho an'ny firenena EU - marketing voafetra ao amin'ny EU
IQOption » Vaovao sy torohevitra momba ny Affiliates » Fepetra IQ Option ho an'ny firenena EU - marketing voafetra ao amin'ny EU
——— Nohavaozina: 10/2020 ———
Araka ny efa fantatrao, ny fampiroboroboana ny IQ Option ho an'ireo mpampiasa avy amin'ny firenena eropeana (EEA) dia iharan'ny torolàlana hentitra amin'ny marketing izay miorina amin'ny takian'ny CySEC. Ny loharanom-pifamoivoizana rehetra ampiasaina hanintonana ireo mpampiasa avy amin'ny firenena EEA dia tsy maintsy ekena mialoha ary arahi-maso tsy tapaka mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara amin'ny torolàlana.
Inona no dikan'ireo mpiara-miasa IQ Option?
1. Safidy fanaovana dokambarotra safidy binary sy safidy nomerika any amin'ny firenena EU / EEA.
2. Fampitandremana loza mety hitranga na tsia.
3. Fampiroboroboana ny zavamaneno na fiasa EEA izay tsy misy amin'izy ireo.
4. Mampiasà fanambarana diso na mifantoka amin'ny tombotsoan'ny vokatra ara-bola na serivisy fotsiny.
5. Ny dokambarotra IQOption amin'ny tranokala izay manolotra fambara ara-barotra, varotra sosialy, varotra kopia, varotra fiara, robot, torohevitra amin'ny fampiasam-bola na serivisy fitantanana portfolio.
6. Mampiasà atiny efa lany andro sy fitaovana fampiroboroboana.
Fepetra CFD ao amin'ny EU - ny dikan'izany ho an'ny mpiara-miasa
* Firenena ao amin'ny faritra ara-toekarena eropeana:
Mampalahelo fa tsy afaka mampiasa ny IQ Option amin'ny faritra sasany ianao.
Misy firenena maromaro izay mamela ny fifanakalozana Binary options amin'ny IQBroker:
Ny fampiroboroboana ny IQOption amin'ireo mpampiasa avy amin'ny firenena eropeana (EEA) dia iharan'ny torolàlana hentitra amin'ny marketing izay mifototra amin'ny fepetra takian'ny CySEC. Ny loharanom-pifamoivoizana rehetra ampiasaina hanintonana ireo mpampiasa avy amin'ny firenena EEA dia tsy maintsy ekena mialoha ary arahi-maso tsy tapaka mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara amin'ny torolàlana. Manondro ny firenena eropeana rehetra izy io:
Repoblika Tcheky (fameperana bebe kokoa)
Latvia (fetra misimisy kokoa)
Portiogaly (fameperana bebe kokoa)
ny UK (Brexit, tsy ao UE intsony)
Raha mpivarotra Affiliate IQ Option ianao dia mety efa nahazo mailaka tamin'ireto fampahalalana manaraka ireto:
Ny fanombanana vao haingana momba ny loharanom-pifamoivoizana EEA anao dia naneho fa tsy mahafeno ny fepetra takiana izy ireo na tsy misy. Mampalahelo fa midika izany fa voatery nampiato ny fanamarinana nataonao ho an'ny firenena EEA izahay. Mandritra izany fotoana izany, ny rohy mpampifandray anao dia hiasa hatrany any amin'ny firenena tsy EEA toy ny mahazatra. Raha vantany vao manitsy ny loharanom-pifamoivoizana ianao dia alefaso any amin'ny mpitantana anao mba hahazoana fankatoavana indray. Raha hita fa manara-dalàna amin'ny fepetra takian'ny mpandrindra izy ireo, dia haverina amin'ny laoniny ny fanamarinana ho an'ny firenena EEA. Mariho tsara fa raha tsy mikendry ny firenena EEA ianao amin'izao fotoana izao dia tsy mila fepetra.
Mariho tsara fa ny tsara indrindra dia ny tsy hikoropaka. Raha vantany vao manisy fanitsiana sahaza ianao dia mandefasa hafatra amin'ny mpitantana anao miaraka amin'ny lisitr'ireo loharanom-pifamoivoizana tianao hamarinina ho an'ny firenena EEA. Azafady azafady fa mety handany andro vitsivitsy ny famerenana azy ireo.
Mba hanampiana anao hahatakatra izay ho jerena voalohany, ny ekipan'ny fanarahan-dalàna IQOption dia nanangona lisitr'ireo olana mahazatra indrindra:
Raha amin'ny fiteny miely patrana any Eropa ny fitaovanao, toy ny anglisy na espaniôla dia tokony holazaina mazava tsara izany IQ Option Europe Ltd. dia tsy manome na mampiroborobo ny safidy mimari-droa ho an'ireo mpivarotra antsinjarany avy any Eropa, ary tokony tsy maintsy hisy izao fanambarana izao: Raha tsy mpanjifa matihanina ianao dia avelao ity pejy ity ”. Raha toa ka tsy azo ampiana ny disclaimer feno noho ny habaka voafetra dia ampiasao ilay fohy: "Voarara ny safidy mimari-droa ao amin'ny EEA".
Ny fampiroboroboana rehetra sy ny fanasana hanokatra kaonty (rohy fisoratana anarana) dia tsy maintsy misy fampitandremana momba ny loza mety hitranga izay tokony hosoratana amin'ny sora-baventy, amin'ny lahatsoratra tsy kely noho ny lahatsoratra mahazatra ao amin'ilay fitaovana, amin'ny fitenin'ilay zavatra, ary amin'ny toerana izay hahasarika ny mason'ny mpamaky azy ireo. Ireo lahatsoratra fampitandremana momba ny loza dia azo jerena ao amin'ny fizarana torolàlana momba ny marketing.
Ny fifandanjana eo amin'ny tombontsoa mety hitranga sy ny risika mifandraika dia tsy maintsy tazonina. Ny fitakiana toa ny "varotra dia mora / mahaliana", "mety ho an'ny rehetra / vao manomboka", "manomboka mandresy / mahazo / mahazo vola", "ny varotra dia mitarika amin'ny fahombiazana, ny fiovan'ny fomba fiainana, ny fahalalahana ara-bola" na ny fanambarana hafa miaraka amina fampiroboroboana mitovy amin'izany tsy tokony hampiasaina ny dikany.
Ny loharanom-pifamoivoizana natokana ho an'ny lohahevitra toy izany, ary koa ny filalaovana na filokana, dia tsy azo ampiasaina amin'ny fampiroboroboana any amin'ny firenena EEA.
Ny ankamaroan'ny fitaovana navoaka taona vitsivitsy lasa izay dia tsy hita taratra intsony ny fepetra momba ny varotra ankehitriny ary tokony havaozina. Raha ny momba ireo fitaovana fampiroboroboana, azafady alao antoka fa hampiasa ireo vaovao farany misy ao amin'ny faritra Promo ianao.
Aza matahotra intsony, manaova fanitsiana mety ary mifandraisa amin'ny manager anao raha hahazo fankatoavana amin'ny tranokala. Indraindray misy ny tsy fifankahazoan-kevitra fa hatreto dia efa namaha ny olana rehetra nataon'ny mpitantana ny IQOption aho.
——– Daty namoahana: 07/2018 ———-
Ny IQoption dia te hampahatsiahy anao fa ny fameperana CFD ho an'ireo mpampiasa vola antsinjarany ao amin'ny EEA * (faritra ara-toekarena eropeana) dia manomboka manomboka amin'ny 1 Aogositra.
Raha mbola tsy nanao fanovana ny loharanom-pifamoivoizana arakaraka ny fepetra ESMA vaovao ianao dia mamporisika anao izahay handray ireo dingana manaraka mandritra ny 5 andro sisa:
Soloy ireo fitaovana fampiroboroboana IQOption ampiasainao amin'ireo kinova nohavaozina izay misy fampitandremana loza mety hitranga ary zahao ny fizarana Promo amin'ny 1 Aogositra satria hisy sora-baventy havaozina bebe kokoa azo avy eo;
Fantaro hoe iza amin'ireo scenario nofaritana etsy ambany no mihatra aminao ary ampio fampahalalana mifandraika amin'ny loharano rehetra manonona CFD amin'ny Stocks, CFD amin'ny ETF, CFD amin'ny Commodities, CFD amin'ny Currency Pairs (Forex), CFDs amin'ny Cryptocurrencies.
Scenario 1 - raha ny tranokalanao dia amin'ny fiteny izay ampiasaina irery ao amin'ny firenena misy mpikambana ao amin'ny EEA, toa ny Suède sy Poloney, amin'ny 1 Aogositra dia tsy maintsy ampidirinao ao amin'ny famerenana, fampitahana broker ary pejy hafa misy tranokala fampitandremana lava kokoa ity tranokala ity:
"CFD dia fitaovana sarotra ary mety ahiana ho very vola haingana noho ny fampiasana azy. Eo anelanelan'ny 74-89% ny kaontin'ny mpampiasa vola antsinjarany very vola rehefa mivarotra CFD. Tokony hoeritreretinao raha azonao ny fomba fiasan'ny CFD sy ny fahafahanao miatrika risika lehibe hahafoana ny volanao. ”
Raha tsy ampy ny toerana hanaovana fampitandremana maharitra, dia ampiasao ity:
"Eo anelanelan'ny 74-89% amin'ny kaonty mpampiasa vola antsinjarany no very vola rehefa mivarotra CFD. Tokony hoheverinao raha afaka miatrika risika be ianao amin'ny famoizana ny volanao. ”
Raha mampiroborobo ny CFD ianao miaraka amina multiplier, havaozy ny vaovao momba ny fetran'ny tombony amin'ny fisokafan'ny toerana ataon'ny mpanjifa antsinjarany any Eropa izay miovaova arakaraka ny fiovaovan'ny antony.
30: 1 ho an'ny mpivarotra vola lehibe (EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD ary USD / CAD);
20: 1 ho an'ny mpivarotra vola tsy dia lehibe, volamena ary indeks lehibe;
10: 1 ho an'ny entam-barotra hafa ankoatry ny indeks volamena sy tsy fananam-bola lehibe;
5: 1 ho an'ny fananana fitoviana sy ny soatoavina hafa;
2: 1 ho an'ny crypto.
Scenario 2 - raha toa ny tranokalanao amin'ny fiteny izay ampiasaina tsy any amin'ireo firenena EEA ihany, toy ny Anglisy, Espaniola, Portiogey, azafady mba alao antoka fa ampio ireto fampahalalana manaraka ireto amin'ny hevitrao, lahatsoratra ary fitaovana ara-barotra hafa:
“Azafady mba ampandrenesina fa ny vokatra sasany sy / na ny ambaratonga azo ampitomboina dia mety tsy ho azon'ny mpivarotra avy amin'ny firenena EEA noho ny fameperana ara-dalàna.”
Scenario 3 - raha ny loharanom-pifamoivoizanao dia amin'ny fiteny izay tsy dia be mpampiasa any amin'ny firenena EEA, toy ny Bengali, Hindi, Thai, sns., Dia tsy ilaina ny fanitsiana manokana.
Ny firenena eropeana rehetra (Austria, Belzika, Bulgaria, Kroasia, Repoblikan'i Sipra, Repoblika Tseky, Danemarka, Estonia, Failandy, France, Alemana, Gresy, Hongria, Irlanda, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Polonina , Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden ary UK) ary Islandy, Liechtenstein ary Norvezy.)
Ny lisitry ny faritra voasakana somary lava:
Russia, Pakistan, Syria, Belzika, Latvia, Australia, Korea Avaratra, Sudan, Canada, Iran, Palestine, USA, Israel, Japan and Turkey
Ny lisitra etsy ambony dia tokony hohamarinina amin'ny tranokala broker IQOption.
Silia, Nouvelle Zélande, Arzantina, Arabia Saodita, Afrika atsimo, Taiwan, Peroa, Venezoelà, Brezila, Tailandy, Korea Selatan, Kolombia, Mexico, sns.
Ny lisitra dia azo inoana fa havaozina ankehitriny. Azafady mba mifanakalo hevitra miaraka amin'ny IQ Option.
Azafady mba jereo ny tranonkala ofisialy ofisialy ary alao antoka miaraka amin'ny IQ Option raha afaka manao varotra ianao na tsia.
← Fampiasana postback miharo - hetsika vaovao, paramaters ary sivana Fanolorana marika: lisitra vaovao misy teny lakile ratsy →